Azerbaijan: ilay Toerana Fivahinianana “Death Star” · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Febroary 2019 8:21 GMT
Raha jerena indray mipi-maso izy ity dia toa mahavariana sy mitodika sahady amin'ny hoavy — toerana fivahinianana misy fitoviana be amin'ilay Death Star hita anatin'ireo horonantsary Star Wars. Mahagaga anefa fa tsy any Las Vegas na koa any Dubai no hatsangana io toerana fivahinianana io, fa kasaina aorina any Baku, renivohitry ny Repoblikan'i Azerbaijan.
Raha misy mila ahy, any anaty efitra ambanin'ny tany any Islandy aho hanangona ireo Wookies sy Ewoks.
Mibitabitaka toy izay koa i Gizmodo, saingy avy eo dia nahamarika fahasamihafàna goavana teo amin'ilay toerana fivahinianana sy ilay toby an'habakabaka manelanelana ireo vahindanitra izay afaka manafoana planeta iray manontolo.
Manamarika ihany koa i Vagabondish fa mitsahatra ny fitoviana rehefa vita ny fandinihana, kanefa mamarana ny revirevintsika rehetra amin'ny fizaràna fahalalana izay mety hahaliana tokoa ireo mpizahatany mety ho avy. Ambaran'io bilaogy io ihany koa fa tsara ny manamarika fa arakaraka ny hisintahanao any atsinanana, no hahitanao endrika maritrano mitodika amin'ny hoavy.
Na izany na tsy izany, araka ny tondroin'i About:Blank, na ho antsoina amin'ny fomba ofisialy hoe Trano Fivahinianana Full Moon Rising izy io na tsia, azo inoana fa ho fantatry ny besinimaro amin'ny hoe “ilay Trano Fivahinianana Death Star” izy io. Na Olaimpika na tsia, mety hisy fivoriambe Star Wars ao Baku. Raha izany, isao ao anatiny aho. Toa milay ilay Trano Fivahinianana.